Barcelona oo guul sahlan ka gaartay Sevilla oo caawa marti ugu ahayd garoonka Camp Nou …+ SAWIRRO – Gool FM
(Barcelona) 06 Oct 2019. Kooxda Barcelona ayaa guul sahlan ka gaartay dhigeeda Sevilla oo caawa marti ugu ahayd garoonka Camp Nou, waxayna ugu awood sheegatay 4-0, kulankooda 8-aad ee horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 3-0 ay ku hor kaceysay ciyaarta kooxda Barcelona.
27-aad Luis Suarez ayaa hogaanka u dhiibay kooxda Barcelona wuxuuna dheesha ka dhigay 1-0, waxaana goolkan ka caawiyay Nelson Semedo.
Daqiiqadii 32-aad Barcelona ayaa heshay goolkeeda 2-aad waxaana 2-0 dheesha ka dhigay xiddiga reer Chile ee Arturo Vidal, iyadoo goolkan uu ka caawiyay Arthur.
Laakiin daqiiqadii 35-aad Ousmane Dembele ayaa si toos ah u niyadjabiyay taageerayaasha kooxda Sevilla ee ku sugnaa garoonka Camp Nou, wuxuuna dheesha ka dhigay 3-0, kaddib markii uu ka dhaliyay kubad uu si qurux badan u farsameystay.
Qeybta labaad marka dib leysugu soo laabtay labada kooxood ayaa waxay sameeyeen qaab ciyaareed fiican, waxayna abuureen fursado badan ee goolal loo filan karay, waloow Barca ay aheyd kooxda fursadaha ugu badan sameysay inta ciyaarta ay socotay.
Daqiiqadii 78-aad Lionel Messi ayaa ciyaarta ka dhigay 4-0 ay ku hogaamineysay kooxda martida loo ahaa ee Barcelona.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa ku soo idlaatay 4-0 ay Barcelona kaga adkaatay kooxda Sevilla oo marti ku aheyd garoonka Camp Nou.
Juventus oo saddexda dhibcood kaga qaadatay kooxda Inter kulankii adkaa ee derby d'Italia …+SAWIRRO
“Bandhigga Kooxda Manchester United waa mid aan la aqbali karin” – David de Gea